Tarikhda imam Ibnu Maajah ilahay haka rali ahade – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Magaciisa iyo Dhalashadiisa
Imaamka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Abuu Cabdullaahi Maxamed Ibnu Yaziid al-Qazwiini . Wuxuu ku dhashay magaalada Qazwiin oo ku dhaw magaaladii loo yaqaaanay Rayy oo hada layidhaa(Tehran) ee dalka Iran. Imaamku wuxuu dhashay 20kii Ramadan 209Hijriyada.
Imaamku wuxuu barashadiisa cilmiga bilaabay isagoo aad u yar, wuxuuna aad u laazimay oo uu la joogi jirey sidoo kale aad ugu weriyay axaadiista imaamkii caanka ahaa ee la odhan jirey Maxamed ibnu Caliyi Addanaafisi.
Ibnu Maajah wuxuu u rartay ama uu soo mariyay cagta si uu cilmi uga soo barto magaalooyin aad u badan oo ahaa barigaa uu isagu noolaa ilaha ugu waaweyn ee laga helo culuumta xadiithka sida: Basra, Baghdad, Ray(Tehran), Masar,kufa, i.w.m.
Inta u ku jiray safarkiisii cilmiyeed ama rixlada wuxu la kulmay culimo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin Abuubakar ibnu abii Shaybah iyo Hishaam ibnu Cammaar ad-dimishiqi.
Culimadiisa ugu waawayn
Cali ibnu muxamed Ad-danaafisi
Abuubakar Ibnu Abii Shaybah
Hishaam ibnu Cammaar ad-Dimishiqi iyo culimo kale oo badan.
Ardaydiisa ugu caansan
Abul Xassan ibnu Qaddaan oo ah raawiga kitaabkiisa sunanka ah kan wariyay
Sulaymaan ibnu Yaziid abu Jacfar
Abuubakar Xaamid Al-Abhari
Kutubtiisa ugu caansan:
Imam ibnu Maajah wuxuu qoray kutub kala duwan oo ay ka mid yihiin:
Kitaab Tafsiira oo musnad ah
kitaab taariikh ah
Sunanu Ibnu Maajah oo ah kitaab aad u weyn.
Imaamkii ugu horeeyay ee ku daray kitaabka Sunanu ibnu Maajah kutubu Sitta wuxu ahaa Alxaafid Abul Fadar ibnu Daahir Almaqdasi oo dhintay 507 hijriga oo ku daray kitaabkisa layidhaa “Adraaful kutubu sitta”. Iyo kitaabkiisa “shuruudu A’immatu sitta”.
Imaamkii ugu horeeyay ee la jamciyay adraaftiisa adraafta Umahaatka kalena wuxu ahaa alxaafid Abul Qaasim ibnu Casaakir oo dhintay 571Hijriga.
Imaamkii ugu horeeyay ee isaguna rijaashiisa la jamciyay rijaalu sitta wuxu ahaa alxaafid Cabdulqani Almaqdasi oo ku daray kitaabkiisa layidhaa “Alkamaal fii asmaa’i rijaal” oo asal u ah dhamaan kutubta laga qoray kutubu sitta.
Ibnu Maajah wuxu u bandhigay culimadii joogtay wakhtigaas, sida caadada u ahaydba salafkii iyo culimadii Islaamka.
Mar uu ka hadlayay kitaabkiisana waxuu yidhi imaamku. ” Abuu Zurca ayaan u bandhigay oo waxuu igu yidhi ,kitaabkaaagan haduu umadda dhex galo kitaabo badan oo jawaamic ah baa la iskaga tagi doonaa maxaa yeelay wax badan baad kusoo aruurisay axaadiithta aan sugnayna waa 30 axadiis”. Balse imaam Dhahabi ayaa yidhi 30kaas xadiis waa Mawduuc, maxaa yeelay kuwa daciifka ahi intaas way ka badanyihiin.
Kitaabka “Sunanu Ibnu Maajah”
Kitaabka Sunanu ibnu Maajah waxuu ka koobanyahay 37 kitaab oo uu ugu horeeyo kitaabu Dahaara waxaana u dambeeya kitaabu Zuhdi.
Baababka uu u qaybiyay kitaabkisa waa 1515 Baab.
Axaadiithta kusoo aroortay kitaabka waa 4341 xadiith.
Imaamka waa lagu yara dhagay oo laguna qabsaday iyadoo lagu haysto inuu kusoo arooriyay kitaabkiisa axaadiith aan sugnayn. Axaadiithta la tuuray ee ku jirta sunanka waa 30 xadiith.
Axaadiithta Daciifka waa ilaa 1000 xadiis, Sida uu Dahabi ku sheegay Kitaabka Siyarka. 13/277 S
Al-imaam Abul faraj ibnu Jawzi isagu 34 xadiith oo sunanu ibnu Maajah ku jirta ayuu ku xukumay inay yihiin Mawduuc (Been abuurad), waxuuna ku daray kitaabkiisa layidhaa “Al mawduucaat”, inkastoo ayna culimadu u wada Sallimin.
Sheekh Albaani isagu axadiista uu ku xukumay mawduuc inay yihiin waa 39 xadiith. Wuxuu shan xadiis ka dheeraaday ibnu jawzi, inkastoo ayna isku axaadiith wada xukumin oo ay isku khilaafsanyihin meelaha qaarkood.
Sido kale Sheekh Albaani axaadiithta uu Daciifiyay ee uusan gaadhsiin darajada mawduuca waxaa weeye tiradoodu 909 xadiis.
Axaadiithta saxiixa ah ee uu saxiixiyay sheekh Albaani waa 3503 xadiith.
Ibnu maajah wuxuu la wadaagay kutubta kale ee ah umahaatu sitta 3002 xadiith. Axaadiithta uu la kaliyoobay ee uu kaligii weriyayna waa 1329 xadiith, waxaana kamid ah axaadiith dhan 428 xadiis oo saxiixatul isnaad ah ( iskood ahaan yacnii iyadoon waxba lagu xoojin) iyo 119 xadiis oo Xasan isnaadkoodu yahay (iskeed ahaan). Kuwa kale ee uu la kaliyoobay xitaa saxiixatu liqayrihaa ama xasan liqayrihaa ama daciifba way ahaan karaan.
Imaamu ibnu maajah ma ahayn shardigiisu inuu soo saaro wixii saxiix ah uun laakiin marka la daba galay qaabka uu wax u qoray waxaa la ogaaday inuu mar welba oo baab gunto uu kusoo hormariyo xadiith walba xadiithka uu ka saxiixsan yahay.
Imaamku wuxuu geeriyooday sanadku markuu marayay 273Hijriga, cimrigiisuna waxuu marayay 64 jirr.
Ilaahay swt ha u naxariisto naxariis waasic. Cilimigii uu umadda uga tagayna ajar iyo xasanaat haka siiyo . Aaamiin
WQ: Cabdiraxmaan Maxammed